ngomphathi ku 20-04-25
Nge-Epreli 25 ka-2020, iHuaian Medicom Medical Technology Co, Ltd yatyala imali kwivenkile entsha yokusebenza kwebhegi yomchamo. I-Huaian Medicom Medical Technology Co, Ltd yasekwa ngo-2008. Kwiminyaka elishumi elinambini eyadlulayo, iHuaian Medicom Medical Technology Co, Ltd izimisele ukuba yinkampani yamazwe aphesheya, kwaye ngoku ...
ngomphathi ku 19-11-15
Ngomhla we-15 kweyeNkanga ngo-2019, i-Huaian Medicom Medical Technology Co., Ltd yathatha inxaxheba kwi-Medical Medical Exhibition. Kumboniso, iHuaian Medicom Medical Technology Co, Ltd ibonise iimveliso ezininzi ezikumgangatho ophezulu, ezinje nge-Urine Bag, iHeparin Cap kunye ne-IV Cannula. Zonke ezi ...
ngomphathi ku 18-07-17
Njengoko sonke sisazi, iSayensi kunye netekhnoloji iya kuba yeyona nto iphambili kwimveliso kwi-21 century. IHuaian Medicom Medical Technology Co, Ltd ihlala ilandela ukukhula kwamaxesha. NgoJulayi 17th 2018, i-Huaian Medicom Medical Technology Co, Ltd ithenge umatshini wemveliso ezenzekelayo ye-heparin ...
Ukulungiswa kotywala, Utywala Pad, Iv Catheter, Ukufunxa iCatheter, Ityhubhu yokondla iintsana, Ubungakanani beBlade yoPhando,